Mashed आलु लागि लेदो
खाद्य र पेय पदार्थ, व्यञ्जनहरु
आलु त दृढ हाम्रो जीवन र आहार मा entrenched, उहाँले हालै रूसी डेस्क मा देखा कि कल्पना गर्न गाह्रो छ। रूस मा यो द्वारा ल्याइयो पत्रुस महान् यसको "युरोप विन्डो" मार्फत। कि यो तुरुन्तै स्वीकार्य छैन मात्र मान्छे छ। तर धूर्त सम्राट र यहाँ एक तरिका भेट्टाए: उहाँले यस क्षेत्र विदेशी जरा रोपेर आदेश दिए र उसलाई एउटा गम्भीर सुरक्षा राख्न, तर हरेक रात यो हटाइयो। त्यसपछि स्टीरियोटाइप लोड: यदि केही गार्ड - यति उपयोगी। उपयोगी, तर सुरक्षित छैन भने, तपाईंले सही आफूलाई छनोट गर्न सक्नुहुन्छ। फलस्वरूप, केही समय पछि सबै क्षेत्रहरू पूर्ण looted, र धेरै वर्ष आलु को स्वाद प्रेम आउन को लागि रूसी थिए। मात्र कि मिठाईहरू थपियो छैन उसिनेर, तला, stewed: फलस्वरूप, आज यो सबै तरिकामा तयार छ। हुनत व्यञ्जनहरु छन्।
मेरो श्रीमान् मसले आलु, धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले आफ्नो शीर्ष पाक विचार र तयार कम्तिमा हरेक दिन खान ठान्नुहुन्छ भनेर। मेनुमा कम्तिमा केही विविधता थप्न, हामी विभिन्न तरिकामा सिक्न छ कसरी लेदो बनाउन को मसले आलु गर्न। खुसीको कुरा, पनि मासु, मशरूम संग र पनि विकल्प संग आलु उल्लेखनीय अनुरूप - धेरै। यहाँ तिनीहरूलाई केही छन्।
च्याउ - चटनी गर्न सस
यसको लागि मशरूम तपाईं कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: मशरूम, chanterelles, मशरूम। अब: मशरूम को 200 ग्राम, ठूलो प्याज, एक सानो गाजर, लसुन केही लौंग, मक्खन को 50 ग्राम (कुनै पनि) खट्टा क्रीम को 50 ग्राम, पीठो को 40 ग्राम, कुनै पनि शोरबा को 200 ग्राम, केचप, नुन, मसला को 1 चम्मच।
सूक्ष्मता को गाजर अंगीठी को मशरूम तयार र स्लाइस, प्याज crumble मा कटौती,। भुट्नु क्रमिक प्याज, गाजर र Fungi। , पीठो संग पतला अन्त कटा लसुन, केचप र मसाले राख्नु अघि5मिनेट को लागि पकाएको मशरूम सम्म simmer गर्न शोरबा थप्नुहोस्।
मसले आलु लागि लेदो - पोर्क
लीन पोर्क 300 ग्राम, दुई प्याज र टमाटर, एक पब, टमाटर को पेस्ट, शोरबा 250 ग्राम, नुन, मसला, तेल को एक चमचा।
मासु कुल्ला, स्लाइस मा कटौती र एक सानो तलना, प्याज थप्न, एक सानो शोरबा तलना र अधिक खन्याउन सबै। 10 मिनेट बाहिर राख्नु, घन मा प्याज र टमाटर थप्नुहोस्। लगभग पाँच मिनेट पछि पेस्ट, मसला राख्नु र अर्को 30 मिनेट कोमल सम्म simmer गर्न।
मसले आलु लागि लेदो - कलेजो
कलेजो (चिकन, पोर्क वा मासु), 300 ग्राम सानो प्याज र गाजर, शोरबा 100 ग्राम, पीठो, नुन, मसला को 40-50 ग्राम।
कलेजो धुने, सबै अनावश्यक हटाउन स्लाइस र अलिकति (5 मिनेट) भुट्नु कटौती। अलग तलना सूक्ष्मता प्याज र गाजर, जिगर थप्न कटा। आटा भंग र तरकारी संग कलेजो को kefir राज्य खन्याउन गर्न शोरबा। बाक्लो सम्म सबै सँगै बुझाने मसला थप्न र सेवा गर्न तयार!
मसले आलु लागि लेदो - चिकन
चिकन को 300 ग्राम, एक प्याज र गाजर, क्रीम, घिउ, मसला, र नुन एक कप।
Fillets सानो टुक्रा मा कटौती। प्याज कटौती, एक गाजर दल्नु। एक कराइ मा प्याज,5मिनेट लागि गाजर भुट्नु थप्न पट्टिका सबै सँगै, एक सानो पानी थप्न र एक सानो बाहिर राख्नु, त्यसपछि क्रीम मा खन्याउन र सबै सँगै कोमल सम्म simmer छन्। गर्नुपर्छ लेदो र यो बिन्दुमा नरम बन्न मासु thicken, तपाईं पहिले नै स्टोभ हटाउन सक्नुहुन्छ।
र कसरी लेदो बनाउन मसले तरकारी लागि?
यो सस जब भण्डारमा मेरो श्रीमान् मासु किन्न भूल छिटो दिन वा, vegetarians लागि उपयुक्त हुन सक्छ। यो हुन गर्दैन।
यसको लागि हामी आवश्यक: एक zucchini, बैगुन, गाजर, एक प्याज, टमाटर को एक जोडी, एक सानो अजवाइन, साग, लसुन, तेल वा दुबला।
सबै तरकारी र टुकडे करो तयार: सानो घन मा एक grater मा एक गाजर, प्याज, अरू सबै कुरा, तर ठूलो घन। प्याज Sauté, को गाजर थप्न, त्यसपछि - सबै बाँकी, पानी वा एउटा सानो रकम खन्याउन तरकारी शोरबा कोमल सम्म र स्ट्यु। कटा लसुन र जडीबुटी थप्न अन्त अघि मिनेट को एक जोडी को लागि।
सस, आज वर्णन, र पर्याप्त बहुमुखी यो juicier बनाउने र नयाँ स्वाद nuances थप्दा, छैन केवल मसले आलु, तर पनि कुनै पनि garnish फिट गर्न। आफ्नो मद्दत यसलाई सबैभन्दा सामान्य उत्सव खाने बनाउने, मेनु विविधता गर्न सम्भव छ। खैर, तपाईं सधैं माथि आउन सक्नुहुन्छ बहाना।
राज र सुझाव - साथ पानी जौ porridge कसरी खाना पकाउनु
हरियो प्याज र अन्डा द्रुत फिलर केक
खुर्सानी भरी पनीर र खुर्सानी शाकाहारी
घर बनाएको मेयोनेज
कसरी multivarka "रेडमन्ड" र "पोलरिस" मा प्यानकेकहरू खाना पकाउनु?
ओवन, माइक्रोवेव, multivarka मा घरेलु पनिर को व्यञ्जन खाना पकाउने
वेरा Bahankova - रूसी सिनेमा को तारा
ग्रिड-राइटिटीबाट आफ्नै हातले कसरी बाड बनाउँदछ
कति वर्ष यो एक ऋण लिन सम्भव छ? युवा उधारकर्ताओं गर्न आवश्यकताहरू
मधुमेह संग विरामीहरु मा विकृति के हो? मधुमेह मा विकृति: लक्षण, लोक उपचार को उपचार
पातलो पेट बेल्ट: समीक्षा, प्रयोग, दक्षता, मूल्य
पीसी 2014-2015 वर्ष मा खेल को सूची: सबै भन्दा राम्रो कम्प्युटर खेल, जारी मिति
कति रूस र चीन मा एक तिब्बती Mastiff छ। रेकर्ड र कारण
अरूलाई मा निराशा - छैन "बाँध" तिनीहरूलाई एउटा कारण छ
Vyacheslav Voinov: जीवनी
सिस्टम आवश्यकताहरु इन्द्रेणी वटा कब्जाको र खेल समीक्षा
ओम्स्क केन्द्रीय हवाई अड्डा - बादल मार्फत बाटोमा रोक्न